Sex Toy, Adult Sex Toy, Male Ubumsulwa, Ubumsulwa Belt, Isixwa Cock Ring - Seasight
nomkhuba wokushaya indlwabu
kungani ukhethe Seasight
Ningbo Seasight Electric Zikagesi co., LTD. is a professional omdala ithoyizi ukukhiqizwa ibhizinisi. Linikeza design, ukukhiqiza, yokuthengisa nangemva-ukudayiswa service njengendlela service iphakethe lonke. Imikhiqizo yethu zihlanganisa vibrators okufana, dildos, amabhola Kegel, nomkhuba wokushaya indlwabu wesilisa, SM amathuluzi, njll Yonke imikhiqizo eyenziwe yezokwelapha-grade, okungezona ezinobuthi futhi khulula-phthalate izinto ngokuhambisana kuso sihambisana nezindinganiso zempilo zomhlaba wonke kanye eqinisekisiwe CE, FDA, SGS futhi RoHS.
Sihlala ukuphishekela eliphezulu imikhiqizo eyikhwalithi kanye imfashini, tebuciko, imiklamo ezintsha, ukuze sikwazi ukumelana nezidingo kusuka medium ekupheleni ukuba ephezulu. Imikhiqizo yethu ikakhulu zithunyelwa USA, Canada, UK, e-Europe, e-Australia kanye nezinye izindawo. Siphinde futhi sinikeze OEM, ODM futhi inkonzo Osm.
Mission we Ningbo Seasight: ngemikhiqizo esibalulekile zonke amakhasimende.
Sex amathoyizi kanye nabantu abadala novelties ekhiqizwa ngokusho Ukucaciswa. Sinikeza izixazululo baphendukela-ukhiye we ubulili esitolo abanikazi, abasabalalisi abenzi. Private ilebula abadala imikhiqizo.
Ekhwalithi Ephezulu & On Time
yokukhiqiza izixazululo Seasight obuhambisana kuphela ephezulu, isevisi kanye isiqinisekiso. Imikhiqizo yakho izothunyelwa ngesikhathi ngokuvumelana umsebenzi wawuhleliwe lwezikhathi.
Amazinga Business Western
Siyaziqhenya e ezindinganisweni ibhizinisi esiqinile entshonalanga eziye kwasenza sakwazi ukuletha imikhiqizo izinga ukuthi ezinye ngeke zikwazi. sisebenzela nge esiqinile isikhathi ozimele kanye nokuzinikela.
Nomkhuba wokushaya indlwabu-SS-107
Nomkhuba wokushaya indlwabu-SS-014
Ikheli: Igumbi 1105,11 / F, Era Jinmao Isakhiwo,
Cha 201, Guang An Road, Haishu District, Ningbo, China
Ucingo: +86 574 87238866
Ifeksi: +86 574 87238899